I-iPad entsha ye-2019 evela kwi-Apple ibizwa ngokuba: yi-iPad Air kunye ne-iPad mini | Iindaba zeGajethi
Ngokwesiqhelo iApple hlaziya izixhobo eziyinxalenye yoluhlu lwe-iPad kabini ngonyaka. Kuqala ngo-Matshi, apho i-iPad esisiseko ihlaziywa khona, ukuyibiza ngandlela thile kwaye kamva ngo-Okthobha, inyanga ebekelwe umboniso we-Pro Pro yoluhlu. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi kulo nyaka kuya kubakho intetho enye kuphela.
Abafana abavela eCupertino bahlaziye iwebhusayithi ngokwandisa uluhlu lwe-iPad, behlaziya ezinye zeemodeli esele zikhona kunye nokususa abanye. Eyona nto intsha inomdla ifumaneka kwimodeli entsha, i-iPad Air, i-iPad ehlala phakathi kwe-11-intshi ye-iPad Pro kunye ne-2018 ye-iPad.
Kodwa i-iPad Air ayisiyiyo kuphela isixhobo esihlaziyiweyo emva kohlaziyo lokugqibela lwewebhusayithi ye-Apple, ukusukela oko I-iPad mini nayo ifumene ithuba, enokuthi ibe yeyokugqibela, ihlaziye zonke izinto zayo zangaphakathi kunye nokudibanisa ukuhambelana nepensile ye-Apple.
Ngokufika kwe-iPad Air, U-Apple ususile i-10,5-intshi ye-iPad Pro kwikhathalogu yayo, I-iPad yokuqala encinci yokufika kwintengiso ngo-Okthobha u-2017 kwaye iqhubekile ithengiswa njenge-iPad yohlahlo-lwabiwo mali kuluhlu lwePro. unamandla, kwaye ungabizi kakhulu.
Enye i-iPad eyenzekileyo kwindawo yokugcina i-Apple yi-iPad mini 4, yeyona iPad indala iApple iqhubeka iyithengisa kwaye khange ihlaziywe phantse iminyaka emi-4, le modeli yeyona ndlela iphantsi ekucetyiswa ekuthengeni kwayo zombini izibonelelo kunye nexabiso.
1.1 Uyilo olulondolozayo
1.2 Icandelo lezithombe
1.3 Amaxabiso e-iPad entsha yoMoya
2.1 Ukusebenza okuphezulu
2.2 Uyilo ekufuneka luphuculwe
2.3 Amaxabiso epad mini
3 Ngoku yonke i-iPad iyahambelana nepensile ye-Apple
IPad Air entsha i ilawulwa yi-A12 Bionic, iprosesa efanayo esinokuyifumana kuluhlu lwe-iPhone 2018, oko kukuthi, i-iPhone XS, i-iPhone XS Max kunye ne-iPhone XR, ke siya kuba ne-iPad iminyaka emininzi. Ukongeza, ngokwe-RAM, sifumanisa ukuba ifikelela njani kwi-3 GB, isixa esilinganayo esisifumana kwi-iPhone XR, i-GB enye ingaphantsi kunezo zeemodeli ze-iPhone XS kunye ne-iPhone XS Max.
Inkqubo ye-A12 Bionic, ivumela ukuba sihlele iividiyo kumgangatho we-4k ngaphandle kokuphazamisa, uyonwabele inyani eqinisekisiweyo, uyilo lweemodeli ze3D kunye nokusetyenziswa kwezicelo ezahlukeneyo kunye ngenxa yokwahlulahlula umsebenzi wokujonga, ngaphandle kokusebenzisa ibhetri kwisixhobo sethu nanini na.
Isikrini sifikelela kwi-intshi ye-10,5 kwaye iyahambelana nepensile ye-Apple, isixhobo esiza kuthenga ngokuzimeleyo. Iscreen sihambelana netekhnoloji yeTone yeNyaniso, esivumela ukuba sonwabele umxholo oboniswe kwiscreen kuyo nayiphi na imeko, nokuba kunxweme okanye kukukhanya kwamakhandlela.
Uyilo lwe-iPad entsha yoMoya iyafana naleyo ifunyenwe kwi-10,5-intshi ye-iPad Pro, Imodeli enezakhelo ezincitshisiweyo, omabini amacala kunye nezantsi nangaphezulu ngokuthelekiswa nemodeli ye-9,7-intshi. Ingama-61 mm ubukhulu kwaye inobunzima obungaphantsi kwama-500 grams.
Ukukhusela i-iPad, iApple ayihlangananga netekhnoloji ye-ID yobuso, Oko bekuya kuthetha ukonyuka kwexabiso, kwaye okwangoku kuyaqhubeka ukuxhomekeka kwisenzisi seminwe kwiqhosha lasekhaya
Nangona kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukubona ukuba bangaphi abasebenzisa i-iPad xa behamba ukugcina inkumbulo, amakhwenkwe I-Apple ibonakala ngathi ayihlawulanga ngokwaneleyo kweli candelo kwi-iPad yoMoya. Ikhamera engemva isinika isisombululo se-8 mpx ngelixa umphambili, wee-selfies okanye zevidiyo ufowuna ufikelela kwi-7 mpx.
Amaxabiso e-iPad entsha yoMoya
Njengoko benditshilo ngasentla, le iPad intsha iphakathi kwe-11-intshi iPad Pro kunye ne-iPad 2018, zombini ngokwendlela yokusebenza kunye nexabiso. Ixabiso le olona hlobo lubiza kancinane lwe-iPad Air ngama-549 eeuros yenguqulo engama-64 GB kunye noxhumano lwe-Wi-Fi.
I-iPad Air 64 GB iWi-Fi: i-euro ezingama-549
I-iPad Air 256 GB iWi-Fi: i-euro ezingama-719
I-iPad Air 64 GB iWi-Fi + LTE: i-euro ezingama-689
I-iPad Air 256 GB iWi-Fi + LTE: i-euro ezingama-859
Uninzi luye lwaba ngamahemuhemu ajikeleze ukuhlaziywa kwe-iPad mini okanye ukupheliswa ngokupheleleyo kwekhathalogu ye-Apple. I-iPad mini se yaba sisixhobo esidala Ngexabiso eliphezulu kakhulu ngezibonelelo ezisinike zona.
Amakhwenkwe aseCupertino kubonakala ngathi banike esi sixhobo ithuba lokugqibela ukongeza iprosesa enamandla kunayo yonke inkampani ekhoyo ngoku, ngaphandle kokuba ne-iPad Pro ngaphandle kokungeza ukuhambelana nePensile ye-Apple.
Xa uhlaziya i-iPad mini, ukuba iApple ifuna ukuqhubeka nokugcina ubungakanani bescreen kuluhlu lwe-iPad, kuye kwafuneka ihlaziye iprosesa ngokongeza i-A12 Bionic, iprosesa efanayo esinokuyifumana kuluhlu lwe-iPhone 2018Leyo yi-iPhone XS, i-iPhone XS Max kunye ne-iPhone XR.
I-iPhone XS Max kunye ne-Samsung Galaxy S9 ubuso ngobuso, yeyiphi engcono? [IVIDIYO]
Ukwenza ulawulo lweprosesa lube mpuluswa kangangoko kunokwenzeka, Imemori yesixhobo yi-3GB, inani elifanayo lememori esinokuyifumana zombini kwi-iPad Air nakwi-iPhone XR, ibe yi-GB enye ngaphantsi kwento esinokuyifumana kuzo zombini i-iPad Pro kunye ne-iPhone XS kunye ne-iPhone XS Max.
Ukuhambelana nepensile yeApple ehamba kunye nobukhulu bayo, yenza isixhobo sakho incwadana yokubhala efanelekileyo Ukuhlala usiphatha, kuba ngesandla esinye singayibamba ngelixa sisebenzisa ipensile ye-Apple, nokuba kukuzoba, ukubhala, ukwenza i-doodle ...
Uyilo ekufuneka luphuculwe
Kwicandelo elidlulileyo, ndikhankanyile ukuba ukuhlaziywa kwe-mini mini kubonakala kulithuba lokugqibela elinikwa ngu-Apple le modeli, kuba njengoko sibona kwimifanekiso yesi sizukulwana sitsha, uyilo luyafana nazo zonke izizukulwana zangaphambili ze-iPad mini, kwicala elinesisa kakhulu, imiphetho ephezulu kunye nezantsi.
Ukuba sithathela ingqalelo ukuba i-iPhone XS Max inobukhulu bescreen se-6,5-intshi kunye ne-7,9-intshi ye-iPad Mini, le yokugqibela iphindwe kabini ubukhulu be-iPhone XS Max. Ewe kunjalo, umahluko wexabiso phakathi kwezi zimbini awysmal, ukongeza kwi I-iPhone ayihambelani nePensile yeApple.
Amaxabiso epad mini
Yongeza itekhnoloji yamva nje ngaphakathi kwi-mini mini ye-iPad ukongeza ekunikezeleni ukuhambelana nepensile ye-Apple, ithwala ukwanda kwexabiso.
I-iPad mini 64 GB iWi-Fi: 449 i-euro
I-iPad mini 256 GB iWi-Fi: 619 i-euro
I-iPad mini 64 GB iWi-Fi + LTE: i-euro ezingama-549
I-iPad mini 256 GB iWi-Fi + LTE: i-euro ezingama-759
Ngoku yonke i-iPad iyahambelana nepensile ye-Apple
Isicwangciso sika-Apple sokulandela kubonakala ngathi senzelwe oko yongeza ukuhambelana nePensile yeApple, Ukusukela emva kohlaziyo lokugqibela, zonke ii-iPads ezikhoyo kumajelo osasazo asemthethweni e-Apple ziyahambelana nepensile ye-Apple, nangona ezinye iimodeli zingenakho ukukusebenzisa ngokupheleleyo.
Kubonakala ngathi iApple iqaphele ukuba kubandakanya inkxaso yesitayile kwi-iPad, njengoko i-Samsung ibisenza kule minyaka mithathu idlulileyo, Ilungele abasebenzisi, kuba ibanzi uluhlu lwamathuba asinika wona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » amacwecwe » Ii-iPads ezintsha ze-Apple zika-2019 zibizwa ngokuba: yi-iPad Air kunye ne-iPad mini